Ungawabeka kanjani ama-alamu nezikhumbuzi ku-Apple Watch | Ngivela kwa-mac
Ungawabeka kanjani ama-alamu nezikhumbuzi ku-Apple Watch
Uma une-Apple Watch yesizukulwane sokuqala noma esamanje kakhulu, unemisebenzi eminingi nezilungiselelo okufanele wazi. Kulabo basebenzisi abangahambeli phambili kangako, ngifuna ukuletha uhlobo lokufundisa noma amathiphu wokuthi ungawabeka kanjani ama-alamu kuwashi lakho. Ngaphezu kwalokho, ngokukhululeka nokunethezeka okufanayo, Ngizokhuluma ngokusetha nokwakha izikhumbuzo. Ifana kakhulu nama-alamu, kepha igxile kakhulu ekukhumbuleni izinto, hhayi ekukuxwayiseni ngezikhathi ezithile, kepha futhi.
Ngaphezu kwalokho, ngithanda ukwenza okunye okuthunyelwe ngemisebenzi nokusetshenziswa ongakunika i-Apple Watch. Kungancoma ezinye izinhlelo zokusebenza futhi kuchaze izinto ezithile noma izici ezithile. Ngalokhu, shiya amazwana ngesicelo sakho ngemuva kokufunda okulandelayo. Qhubeka ufunde.
1 Izinhlelo zokusebenza zomdabu ze-Apple Watch
2 Setha ama-alamu futhi ungalali
3 Izikhumbuzi ku-Apple Watch, ekugcineni
Izinhlelo zokusebenza zomdabu ze-Apple Watch
Ngifuna ukuqala ngokusho ukuthi okukhethekile kwewashi, ngaphezu kwezemidlalo, ezempilo, ukuqeqeshwa nakho konke lokho, kukuzinhlelo zokusebenza zomdabu. Yizo ezisebenza kahle kakhulu futhi ukuhlanganiswa kwazo ne-iOS kuphelele. Izintandokazi zami yizona ezilula kakhulu, futhi sengivele ngasho lokho iwashi lenzelwe ukusetshenziswa okuqondile nokusheshayo. Bheka futhi okunye okunye. Futhi izinhlelo zokusebenza zomdabu ziyakuvumela. Lezo engizisebenzise kakhulu kulawa mahora angama-24 selokhu ngazithenga futhi engizisebenzisa kakhulu yilezi: Lezo ezibhekise kuwashi, isitophuwashi, i-alamu, njll. Sizokhuluma ngokuqeqeshwa ngokuhamba kwesikhathi kokunye okuthunyelwe, manje ake sigxile kuzikhumbuzi nama-alamu.
Setha ama-alamu futhi ungalali
Ukusetha i-alamu ku-Apple Watch ungakwenza kusuka kuhlelo lokusebenza uqobo. Uyifaka bese unikeza i-Add Alarm, bese usetha imininingwane yesikhathi. Easy futhi elula. Uma uvilapha noma ufuna nje ukwenza lo msebenzi wokumisa ube lula futhi usheshe, buza uSiri ngqo. Ngesikrini sewashi sivuliwe, yithi: Sawubona Siri. Izosebenza ngokuzenzakalela futhi ilalele isicelo sakho. Esikhundleni sokuyibiza ngezwi, ungacindezela umqhele wedijithali ukuze uyisebenzise ngendlela efanayo. Bese umbuza.
«Sawubona Siri, setha i-alamu ngo-7 ekuseni»Noma noma kunini lapho ufuna khona. Futhi kuzovela uma kwenzeka ufuna ukuyiguqula, kube nephutha noma ufuna ukwengeza noma ukususa abanye. Easy, esheshayo futhi ngempumelelo. Ngiyayithanda nokuthi isebenza kanjani, futhi inyakaza futhi izwakala njenge-alamu. Ebusuku uyishiya neshaja kuleyo ndlela yokufuna ukwazi eseceleni kombhede futhi awugcini nje ngokubona isikhathi se-alamu esibukweni, kodwa iyakuvuka iphinde ikuxwayise ukuthi usebenze njengoba kulindelwe, ngaphandle kokwethuka noma izinkinga. Kucatshangwa.
Ngithanda kakhulu ukuthi isebenza kanjani futhi ngithola eziningana. Enye yazo zonke, njengoba kufanele kube njalo. Kukhona nezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu ezivela eceleni ukukwenza ngezinye izindlela nangezinye izinhlobo zezixwayiso.
Izikhumbuzi ku-Apple Watch, ekugcineni
Futhi ngithi ekugcineni ngoba sesilinde isikhathi eside. Akukhethi kuphela imodeli yochungechunge 2 noma enye into. Kuyinto eseyintsha esayibona ngeWatchOS 3 nokuthi asiqondi ukuthi kungani ingafikanga ngaphambili. Ukusebenza kwayo kuyefana nalokho kwe-iPhone. Uvula uhlelo lokusebenza futhi unezigaba ezahlukahlukene ozenzile ngaphambili kudivayisi yakho yeselula. "Izinto okufanele zenziwe", "Izikhumbuzi", "iCloud" nezinye eziningi. Labo obafunayo. Kulowo nalowo uzobona izikhumbuzo zakho futhi ungadala okuningi.
Ungazakha kanjani? Kulula kakhulu. Inqubo efanayo njengakuqala. Ngakolunye uhlangothi, ungakwenza ngesandla ngokungeza nokulungisa imininingwane. Ngakolunye uhlangothi kulula kakhulu. Buza uSiri. "Sawubona Siri, ngikhumbuze ngehle ukuyocisha igesi ngo-7 PM." Kulula njengalokho.
Njengoba ukwazi ukubona, iningi Okuyisisekelo futhi okulula kulula ukukwenza ku-Apple Watch. Futhi into enhle kakhulu ukuthi isaziso siyashesha futhi asicasuli, ngaphezu kwalokho uzosinaka noma ngabe awunayo i-iPhone, futhi ngokuzimela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Pro » Ungawabeka kanjani ama-alamu nezikhumbuzi ku-Apple Watch
Sawubona, ngisanda kuba nochungechunge lwe-Apple Watch 3, futhi kwangishiya ngicasukile ukuthi ayinayo "isidlidlizi" sama-alamu ... ngithinte u-Apple bangitshela ukuthi kuyindlela abangayitholi ihlelwe, ukuthi ama-alamu azwakala kuphela futhi ANGADUMI. Kuze kube manje bengisebenzisa i-Pebble, futhi bengisebenzisa i-alamu ethule (isidlidlizi) newashi esihlakaleni sami, futhi ngingathanda ukusebenzisa iWatch ngendlela efanayo. Ngizame konke, ngikubeke kwimodi yokuthula (bona ukuthi iyadlidliza yini, kodwa lutho). Ama-Apple nawo angitshela ukuthi ama-alamu asuka ku-iPhone kuya kuWatch nawo "awavumelanisiwe" nawo, ukuthi uma ngisetha i-alamu ku-iPhone iyasebenza kuWatch.
Engicabanga ngayo hallucinate ... noma kukhona abasebenzisi abanobuhlakani futhi baphatha ngemisebenzi efihliwe noma leyo yoxhaso lwe-Apple ayitholi.
I-WhatsApp nokuthumela imiyalezo kuvuselelwa i-iOS 10